Iindaba -Uyikhetha njani i-blade ukuze isebenze
1. Jonga iwelding yeblade yesarha. Inxalenye edityaniswe nengxubevange kunye nomzimba weblade akufuneki ubutyheli kakhulu njengobhedu. Akukho abathengisi bobuxoki. I-solder kufuneka ibe mhlophe ngandlela ithile, kunye nelayini ebhityileyo, icoceke kakhulu. Akukho rusi wobhedu luhlaza.
Inxulumene nokhuseleko, awufuni iincakuba zentsimbi eziphaphazelayo xa usika iinkuni. Inamandla njengompu omncinci.
Uyikhetha njani iblade ukuze isebenze?
2.Jonga i-blade yesarha ebukhali, kukho amacala amane aloliwe, amacala amabini, umphambili wamazinyo ngaphambili, umphezulu ophezulu.Ukusila okugudileyo, akukho concave kunye ne-convex, ukungqinelana okuhle, i-winger yentsimbi. Akukho kuvuza okanye kungafakwanga. Kwaye iya kuncamathisela isarhushi kwisarha ephezulu ngaphambili nangasemva.
3.Ukujonga umphezulu womzimba wefilimu, ifuthe lokucoca kufuneka laziwe ngumntu wonke.Ukutyibilika komlinganiso wokungqubana usezantsi, akukho lula ukunamathela iichips zeenkuni kunye nokunamathisela kweenkuni.Inkangeleko ilungile.Ingalinganiswa jonga inqwelomoya, ayinakulinganiswa njengesitya.
4. Ukuba iimeko ziyavuma, ungafaka isarha kumatshini kwaye wenze uvavanyo. Ukuba akukho ngxolo okanye akukho ujingi xa uzilazila. (Lumka ngeli xesha) Cotha ngesandla sakho, ulinganise umlo wokubaleka.
Ngokubhekisele kwiindlela zokuhlola zobuchwephesha, baxhomekeke kuphela kwizixhobo nakwizixhobo zokulinganisa ukwenza uhlolo olunzulu ngakumbi. Ukuthunyelwa kweesarha zokuthumela kumazwe angaphandle kuyo yonke i-15.88mm kunye ne-25.4mm imingxunya ephakathi, kwaye i-shaft yasekhaya ibonakala ingama-20 okanye i-18. ngamazinyo angama-intshi angama-24, amazinyo angama-40 angasetyenziselwa ukusika, kungasetyenziswa ngqo isarha, amazinyo angama-80 okanye amazinyo ali-100.
Isarha entle inokusika ngcono kunendawo ekucwangciswe kuyo, kungabikho burr emaphethelweni, ngakumbi ukuba iinkuni zigawulwa nzima. Kulungile!
IKhabhinethi yesixhobo somthi, Iibhodi zendlela ze-CNC, Cnc Machine Izixhobo, Izixhobo zikaRobin Wood, IsiCwangciso seKhabhinethi sezixhobo zeKhabhinethi, Cnc Bits,